सर्जकको नाम सहायकमा जोडिएपछी प्रहरीमा उजुरी(भिडियो सहित) – Radio Madi
नारायण भट्टराई,७ मंसिर २०७५
नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा बेलामा मौकामा बिभिन्न बिवादहरुले चर्चा पाउने गर्छन । कहिले गाएको पारिश्रमीक नपाएको बिवाद चर्चामा आउँछ, त कहिले स्रष्टा वा सर्जकको नाम नै नराखेर बिवाद चर्चामा आउँछ ।
आज हामी एउटा यस्तो मुद्दाको बिषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ । जुन गीतमा सर्जकको नाम त जोडियो तर सहायकको रुपमा । यतिबेला यस गीतका गीतकार डि.आर सुजन तथा संगीतकार लालकुमार बराल न्याय खोज्दै माहानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, काठमाण्डौँ पुगेका छन् ।
जि.बि. दुलालले १८ अगष्ट २०१८ मा ‘तिमी पनि बोलिनौ’ बोलको गीत रेकर्ड गराएका थिए । शिशिर डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो, अनामनगरमा रेकर्ड भएको उक्त गीत २२ नोभेम्बर २०१८ मा हाइलाइट्स नेपालको आधिकारिक युट्युव च्यानलबाट रिलिज भयो । रिलिज भएको कुरा पनि सर्जकहरुले युट्युव हेर्दै गर्दा मात्र थाह पाए । गीतकार डि.आर सुजन भन्छन्, ‘गीत आयो भनेर खुशी हुँदै भिडियो हेरेको त गीतकार तथा संगीतकार आँफै भएको र बास्तबिक स्रष्टालाई सहायकमा नाम जोडेर रिलिज गरिएको रहेछ । त्यसपछि भाइलाई म्यासेन्जरबाट म्यासेज पठाएर कुरा गर्न खोजेको जि.बि. भाइले वास्ता नै गर्नुभएन अनि हामीले निबेदन दिएका हौँ ।’
माथी प्रस्तुत रिपोर्ट १८ अगष्टका दिन तुलसी डिजिटल म्युजिकको युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको थियो । रिपोर्टमा गायक दुलाल स्वयमले गीतकार डि.आर सुजन, संगीतकार लालकुमार बराल र एरेन्जर हेमन्त शिशिर भनि स्पष्ट खुलाएका छन् । तर गीतको सृजनामा किन त्यसरी आफ्नो नाम प्रमुख बनाइ बास्तबिक सर्जकलाई सहायक बनाएका हुन त दुलालले ? यो प्रश्नको जवाफ अब न्यायलयबाट नै आउने दिन थाह होला । रिलिज भएको गीतको भिडियो हेर्नुहोस ।
साहित्य मार्फत खबरदारी देखि समृद्धीका कुरा
दुनै–जुफाल,सूँ पानि सड्क खुलेन मर्मतको काम गरिदै ।